mirahalahy ireto hamono an’ilay mpanakanto Rah-Ckiky tao Toamasina, ka itondrany takaitra amin’ny vatany ankehitriny. Miandry fitsarana any am-ponja izy mirahalahy ireto nanomboka omaly tolakandro. Fantatra fa valifaty ny anton’ny famonoana. Raha tsiahivina, volana vitsivitsy talohan’izao dia nisy namaky ny trano fandraisam-bahin’ity mpanakanto ity (Bungalow) tao Tsarahonenana. Rehefa natao ny fikarohana dia i Romain no nanao ny asa ratsy. Naiditra am-ponja vonjimaika izy taorian’izay. Nitalaho anefa ireo mpiara-monina sy ny fianakaviany noho ny fahasahiranany satria asa posy no hamelomany ny vady aman-janany. Nalahelo ny mpitory ka tsy niatrika ny fitsarana. Afaka soa aman-tsara noho ny fisalasalana izy. Tsy nahafaly an’i Romain izany ka izy namalifaty izao. Manahy ny mety ho valifaty ny fianakavian-dRah Ckiky ka voatery niala tsy nipetraka ao Tsarahonenana misy ny tranony sy ny fihariany amin’ny alalan’ny trano fandraisam-bahiny “Bungalow” izy ireo izao.